wuhan virus – Healthy Life Journal
All posts tagged "wuhan virus"
ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) အငြိမ်းစား၊ ပြည်သူလူထုအတွင်း ကူးစက်ရောဂါ ပျံ့နှံ့လာတဲ့အချိန်ကာလမှာ ရက်ကွက်လူတွေထဲမှာ စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ အမေရိကန်နိုင်ငံထုတ် Psychiatric Time ဂျာနယ်မှာ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ အိပ်မပျော်ခြင်း၊ စိတ်မကျေမနပ်ဖြစ်နေခြင်း၊ စိုးရိမ်သောကများခြင်း၊ ရောဂါကူးစက်မှာကို ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေခြင်း၊ စိတ်တိုလွယ်ခြင်း စတဲ့...
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အတွက် အိမ်တွင်းသန့်ရှင်းရေး (Routine Cleaning and Disinfection of Households)
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ နေအိမ် ရုံး အလုပ်နေရာတွေကိုပါ ဆိုလိုတယ်။ မျက်နှာပြင်တွေကို ဘယ်လိုသန့်ရှင်းပေးမလဲ။ စားပွဲ၊ ကုလားထိုင်၊ ထိုင်ခုံ၊ တံခါးလက်ကိုင်နေရာ၊ မီးခလုတ်၊ ရေအိမ်သာ၊ ပိုက်ခေါင်း၊ လက်ဆေးခွက် စတာတွေ။ ၁။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့သူ လက်အိတ်သုံးရမယ်။ နှာခေါင်းစည်းလိုမယ်။ ၂။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်နေချိန်မှာ...
COVID 19 နှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူ့ဆေးရုံများတွင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမှု
ပါမောက္ခဦးသိန်းမြင့် ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ မကွေးဆေးတက္ကသိုလ် ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး ဖြေကြားသည်။ Q. ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများစုမှာဖြစ်နေတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးသူတွေထဲမှာ အခြေခံရောဂါရှိသူဦးရေက များတယ်ဆိုတော့ အကယ်၍ သံသယလူနာရောက်လာခဲ့ရင် ဆရာတို့ဆေးရုံမှာ ဘယ်လိုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်ထားပါသလဲ ဆရာ။ A. COVID...
ပါမောက္ခဦးသိန်းမြင့် (ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ မကွေးဆေးတက္ကသိုလ်) ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး ဖြေကြားသည်။ Q. COVID 19 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဝင်တဲ့အခါ ကိုယ်ခံအားနည်းတဲ့သူတွေဆိုရင် စိုးရိမ်ရတယ်ဆိုပြီး ပြောနေကြပါတယ်။ ကိုယ်ခံအားစနစ် နည်းသူတွေထဲမှာ ဆီးချိုရောဂါရှိသူတွေ ပါတယ်လို့ ပြောနေတဲ့အတွက် ဆီးချိုရောဂါရှိသူတွေအနေနဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်မြင့်တက်အောင် ဘယ်လိုဂရုစိုက်...
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ(COVID-19) နှင့် ပတ်သက်ပြီး အဓိကအချက်လေးချက်ကို ပြောကြား
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က COVID-19 နှင့် ပတ်သက်ပြီး ၂၀၂၀ မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင် မီဒီယာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ရာ အဓိကအချက်လေးချက်ကို ပြောကြားခဲ့သည်။ “အဓိကအချက်လေးချက်ကို ကျွန်တော်အတိုချုပ်ပြောပြပါရစေ။” ပထမဦးစွာ အဆင်သင့်ဖြစ်နေရန် ပြင်ဆင်ပါ။ ဒုတိယအချက်မှာ ရောဂါရှာဖွေဖော်ထုတ်ပါ၊ ကာကွယ်ပါနဲ့ကုသပါ။ တတိယအချက်က ရောဂါပျံ့နှံမှုကိုလျှော့ချပါ။...
၀ူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (COVID-19)ကြောင့် ဖြစ်တတ်သည့် အဆုတ်ရောင်ရောဂါဆိုသည်မှာ
ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားသည်။ Q. ဘယ်လိုလူတွေက ဝူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အဆုတ်ရောင်ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုများပါသလဲ ဆရာ။ A. ဝူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (COVID-19)က အသက်ရှူလမ်းကြောင်းက ဝင်လာတဲ့အတွက် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းအပေါ်ပိုင်းမှာ နေရာယူတယ်၊ ပြီးရင်ပွားတယ်၊ ဗိုင်းရပ်စ်တစ်ကောင်တည်း ဝင်လာလို့ကတော့ ရောဂါလက္ခဏာ ပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။...
ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားသည်။ Q. လူစုဝေးတာကြောင့် ဝူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး နောက်ဆက်တွဲ ဘယ်လိုအကျိုးဆက်တွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါသလဲ ဆရာ။ A. ဝူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ လူစုလူဝေးပြဿနာအကြောင်းပြောရရင် ထင်ထင်ရှားရှားသိနိုင်တာက တောင်ကိုရီးယားပါ။ ပိုးရှိသူတစ်ဦးက ဘုရားဝတ်ပြုတဲ့နေရာသွားရင်း အဲဒီနေရာက လူတွေရာနဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီး ကူးစက်ပျံ့ပွားမှုဖြစ်ခဲ့တယ်။...